पूजा शर्मा एक हप्तामै दुब्लाइन् ! (फोटो फिचर) « Ramailo छ
पूजा शर्मा एक हप्तामै दुब्लाइन् ! (फोटो फिचर)
प्रकाशित मिति : Jul 13, 2018
समय : 8:18 pm
निर्देशक शोभित बस्नेतको फिल्म ‘बाबु कान्छा’ हेर्न नायिका पूजा शर्मा ११ बजे बिग मुभिज पुगेकी थिइन् । निर्देशक बस्नेतका लागि विशेष शोमा पुगेकी पूजाले फिल्ममा सलोन बस्नेत र करिश्मा श्रेष्ठको जोडी स्विट लागेको बताइन् । भिडियो हेर्नुस् :
‘बाबु कान्छा’ हेर्न पुगेकी पूजा गएको एक साता अगाडी भन्दा केही सिल्म देखिइन् । मोटाइन् पूजा भन्नेहरु दुब्लाइछौं भन्दै थिए । कसरी त ? ‘कडा मिहेनत गरियो’, पूजाले भनिन् । आफु मोटाएको समाचार मिडियामा आएपछि पूजा सोहीदिन देखि खान्की बन्द गरेकी रहिछन् । ‘केही खाको छैन’, पूजाले स्लिम हुनुको राज खुलाइन्, ‘जिम पनि गैरहेको छु ।’
एक सातामा पूजा कति दुब्लाइन् त ? ‘३ केजी घटेछु, अझै पाँच केजी घट्नु छु’, पूजाले भनिन् । फिल्म ‘रामकहानी सुटिङ सकेपछि पूजा मोटाएकी थिइन् । तर उनी यतिबेला दुब्लाउनतर्फ लागेकी छिन् । पूजा अभिनित फिल्म रामकहानी भदौ २२ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्ममा पूजाको अपोजिटमा नायक आकाश श्रेष्ठ प्रस्तुत छन् ।